Corlu ရထားအဖွစျဆိုးကိစ္စ, အ Lounge များတွင်ယနေ့ 600 နှစ်ချက်ဆွဲဆောင်မှု - rayhab ဖြစ်ပါသည်
HomeတူရကီMarmara ဒေသကြီး59 CorluCorlu ရထားအဖွစျဆိုးကိစ္စ, ယနေ့ 600 နှစ်ချက်ဆွဲဆောင်မှုခန်းမထဲမှာ
corlu ရထား faciasi ရုံးတင်စစ်ဆေးဒီနေ့ရဲ့အမွှာခန်းမတွင်တွေ့မြင်ပါလိမ့်မည်
မိသားစု '' အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အသေး၏ '' ခန်းမအတွင်းပထမဆုံးကြားနာအတွင်းမှခေါ်ဆောင်သွားနှင့်ရှေ့နေများထို့နောက်တရားရုံးတွင်အမှုကနေရုပ်သိမ်းကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်
Tekirdag Corlu ခရိုင်, သူ့မိသားစုနှင့်အခန်းတွင်းနေထိုင်နေကြရှေ့နေများနှင့်အတူခိုင်ခိုင်လုံလုံခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီး faciayl နှင့် ပတ်သက်. တရားစွဲဆိုမှု၏ပထမဆုံးကြားနာ၏ Lounge များတွင် 25 လူများ, သေဆုံးခဲ့သည် 328 ကလူဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်အသေးစားနှင့်ရဲကရိုက်နှက်ခဲ့သညျ။ သူကတရားရုံးကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့မှုကြားနာ၏တင်သည့်အောက်ပါ။ စက်တင်ဘာလ Corlu 10 600-ထိုင်ခုံခန်းမထဲမှာရွှေ့ဆိုင်းပထမဦးဆုံးတရားရုံးကြားနာပြည်သူ့ပညာရေးစင်တာ၌ကျင်းပပါလိမ့်မည်။
T24အစ္စတန်ဘူလ်၏သတင်းဂုဏ်သတင်းအဆိုအရ, Edirne, Uzunköprüခရိုင် Halkalı'' Moving သို့မဟုတ်သွားကြဖို့အကြောင်း 3626ခရီးသည်နှင့်ရထားလမ်းထံမှထွက်ဖြုတ်ချအနီးဇူလိုင်လ 8 2018 Tekirdag Corlu ခရိုင်အတွင်းခရီးသည်တင်မီးရထားဝန်ထမ်းများကြောင့်Sarılarရပ်ကွက်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ မတော်တဆမှုအတွက် xnumx ရဲ့ကလေး7လူတွေ 25 ကလူဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်, သူတို့ဘဝဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ အဆိုပါချွတ်ယွင်းBaşsavcılığı'nca, တာကနိုင်ငံတော်မီးရထား၏ xnumx'inc ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှု၏အမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်မှုအနိုင်ရသူကို Corlu ရီပတ်ဘလီကန် Halkalı ဒါရိုက်တာမီးရထားကို Maintenance မီးရထားကို Maintenance ဦးစီးဌာန Turgut Kurt အဖြစ်အမှုဆောင်xnumx'ünc Çerkezköy အဘယ်သူသည် Ozkan က Parker, လမ်းမကို Maintenance Şefliğiအရပ်ဘက်ကျွန်နှင့် Lightning '' နွှဲသေခြင်းအကြောင်းမေလအတွက်နှစ်စဉ်ယေဘုယျစစ်ဆေးရေးအစီရင်ခံစာ, Bridges ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Cetin မှာ undersigned အဖြစ် Jalaluddin အမြန်တာဝန်ရှိသူများနှင့်အတူ TCDD အပေါ် In-line ကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့်ပြုပြင်အလုပ်လမ်းမကြီးကို Maintenance နှင့်ပြုပြင်ခြင်းစားဖိုမှူးများတွင်လမ်းကို Maintenance Şefliği ပြစ်မှုxnumx'şနှင့်ကိစ္စတွင်၎င်း Assize တရားရုံး xnumx'inc Corlu အတွက်တင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်2မှတစ်နှစ်တစ်ဦး၏တစ်နှစ်ထောင်ဒဏ်အထိဒဏ်ရာဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။
တရားမျှတမှုရဲ့နန်းတော်မှာဇူလိုင်လ31 Corlu အပေါ်အမှုဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။ အဆိုပါ 130 ရှိလူများပြစ်မှုဆိုင်ရာတရားရုံးညီလာခံခန်းမထဲမှာကျင်းပစတင်ခဲ့သည်။ သို့သော်မိသားစုများခန်းမထဲမှာအတွင်းပိုင်းalınmayıncaရန်ပွဲသောမြေပေါ်တွင်နေထိုင်နေကြပါပြီ။ အဆိုပါရန်ပွဲမိသားစုများ '' ရှေ့နေများတရားခွင်၏ start အတူ 1 နာရီအကြောင်းကိုကြာမြင့်ပြီးနောက်ခန်းမရဲ့မိသားစုကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်, ဖြစ်ရပ်များအစီအစဉ်အပေါ်များမှာဆောင်ခဲ့လေ၏။ ရှေ့နေများသည်တရားခွင်၌၏တံခါးကိုသော့ခတ်, အိမ်တွင်းယူကြောင်း၏မိသားစု, အတွင်းအပြင်နှင့်ပြင်ပရှိအချို့ရှေ့နေများနှင့်အတူမိသားစု, ပေးထားသောညွှန်ကြားချက်ရိုက်နှက်ခဲ့စောဒကတက်ခဲ့ကြသည်။ ရှေ့နေများစော်ကားခံရသည့်အာရုံအဆုံးအဖြတ်များအတွက်ညွှန်ကြားချက်ပေးခဲ့တယ်သူတစ်ဦးပြစ်မှုဆိုင်ရာတင်သွင်းခဲ့သည်။ ရာဇဝတ်သားတိုင်ကြားချက်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုထောက်ပံ့အတွက်တရားရုံးအစိုးရရှေ့နေ, ညွှန်ကြားချက်ပေးတဲ့သူကိုဆုံးဖြတ်ရန်တရားရုံးမေးတယ်။
ပြစ်မှုဆိုင်ရာတိုင်ကြားစာနှင့်အသနားခံစာအပေါ်တရားရုံးဖိုင်ကို2ကြောင်းရှင်းပြခြင်းအားဖြင့်အမှုကနေဆုတ်ခွာဖို့။ သူကအမြင့်ပြစ်မှုဆိုင်ရာတရားရုံးမှစေလွှတ်ခဲ့သည်။
2 ။ Assize တရားရုံးအမှုကနေဆုတ်ခွာဖို့ကော်မတီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုငြင်းပယ်ခဲ့သည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်, "Corlu 1 ၌တည်၏။ အဆိုပါ Assize တရားရုံး၏ဆုံးဖြတ်ချက်၏ဆုတ်ခွာအဲဒီမှာကောက်ချက်ချနှင့်သင့်လျော်သောခဲ့တာကိုတွေ့။ တရားခွင်၏ဆုံးဖြတ်ချက်၏ဆုတ်ခွာ၏ဖျက်သိမ်းရေးပုဒ်မကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အောက်မှာသင့်လျော်သောပါကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျတော် 1 / 30 အားဖြင့်ဆုတ်ခွာဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်၏ဝင်း Corlu xnumx'inc Assize တရားရုံး, Corlu ကြောင်းသင့်လျော်သောအရေးယူဆောင်ရွက်မှုဖိုင်2သေချာစေရန်။ အဆိုပါ Assize တရားရုံး၏ပြန်လာ, သင့်လျော်သောဖိုင်ပေါ်တွင်စာမေးပွဲ၏ရလဒ်ချင်ကြဘူးနှင့်တစ်ဦးတညီတညွတ်တည်းမဲပေးဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်တိကျစွာ "ဟုကြေညာချက်ကဆိုသည်။
ဇူလိုင်လအတွက် Corlu အရွယ်ရောက်ပညာရေးစင်တာခန်းမအပေါ် Bulent Ecevit 15 Çorluသိုးထိန်းရေပန်း Boulevard ရပ်ကွက်အတွင်းရထားမတော်တဆမှုတရားစွဲဆိုမှုတစ်တရားခွင်၌အဖြစ်ကိုပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်တွေ့မြင်နိုင်ရန်အတွက်။ ကြားနာခြင်းမပြုမီခန်းမများ၏ဝင်ပေါက်မှာ 600 လူတွေကိုလုံခြုံရေးကင်မရာများနှင့်အတူအင်္ဂါနေ့တွင်စတင်မည်, X-Ray ရောင်ခြည်သုံးစက်ကိရိယာများကိုဖန်ဆင်းခဲ့အစီအစဉ်များခန်းမအတွင်းမှလုပ်ခဲ့ကြသည်။ ရှေ့နေများ, သားကောင်များ၏ဆွေမျိုးသားချင်းများအတွက် reserved အပိုင်းပြင်, တရားခံနှင့်သူ၏ရှေ့နေများ၏ပထမဦးဆုံးအတန်းများအတွက်ပြင်ဆင်ကြ၏။ တရားရုံးများ၏ထိုင်ခုံအစိတ်အပိုင်းများပရိသတ်ကိုခွဲခြားခဲ့ခန်းမ၏စင်မြင့်ပေါ်တွင်နေရာတစ်နေရာယူပါလိမ့်မယ်။
Çorluအတွက်မီးရထားအဖြစ်ဆိုး: များအတွက်ရောင်းချနှစ်ချက် 360 563 ရထားလက်မှတ်တွေ 25 / 07 / 2018 Tekirdag Corlu အသစ်အသေးစိတ် 24 လူတစ်ဦးရဲ့ဘဝသတ်သောရထားပျက်ကျမှုနှင့် ပတ်သက်. ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ 360 563 ကိုရောင်းလက်မှတ်တွေကလူကိုလေ့ကျင့်ပေးဖို့အာကာသနှင့်အတူထင်ရှား။ , အဆိုပါဝန်ကြီးဌာနမှအနိုင်ရရှိပြီးနောက်ကြေညာချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ် "ခရီးသည် 3626န်ထမ်းခဲ့," ဟု၎င်းကပြောသည်။ Corlu လူတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီးသောခရီးသည်တင်မီးရထားအတွက်အမတ်နေရာအရေအတွက်ကထက်ပိုပြီး, ထိုဘေးဥပဒ်ကိုအတွက် 24 လူတွေဒဏ်ရာရ, 341 သေဆုံးခဲ့သည်။ ယင်းက Hurriyet သတင်း Saymaz အစ္စမေးလ်, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့်မတော်တဆမှုအပြီးအခြေခံအဆောက်အအုံနှင့်အညီလက်မှတ်အရောင်း 563 Uzunköprü-Halkalı ထိုကာလများတွင်ရထား "6 လှည်း, 3626ခရီးသည်နှင့်ဝန်ထမ်းများခဲ့" ဟုသူကရှင်းပြသည်။ ရေးသားထားသောမတော်တဆမှုအဆိုအရအစီရင်ခံစာရက်ပေါင်းအကြာတွင်လှည်း 60 ရှိပါတယ် ...
Çorluအတွက်မီးရထားမတော်တဆတရားစွဲဆိုမှုဆွဲဆောင်မှုပြည်သူ့ပညာရေးစင်တာ 29 / 07 / 2019 ဒုတိယရုံးတင်စစ်ဆေး 25 လူ Tekirdag ၏Çorluခရိုင်ရထားမတော်တဆမှုသေဆုံး, 10 စက်တင်ဘာလÇorluအရွယ်ရောက်ပညာရေးစင်တာခန်းမထဲမှာကျင်းပလိမ့်မည်။ Edirne, အစ္စတန်ဘူလ်၏Uzunköprüခရိုင် Halkalıထိုနေ့ရက်သည် lhareket ဇူလိုင်လ 8 2018 သှားဖို့, TekirdağSarılarရပ်ကွက်၏Çorluခရိုင်မှောက်အနီးလွဲချော်ရပ်တန့်တာကိုပေါ် မူတည်. ရရှိနိုင်ပါခရီးသည်နှင့် 3626န်ထမ်းများလေ့ကျင့်။ xnumx ရဲ့သားသမီးများကလူမတော်တဆမှုမှာသူတို့ရဲ့အသက်ဆုံးရှုံး7။ 25 ကလူဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ ပြစ်မှု 328 နှစ်xnumx'şမတော်တဆမှုပြီးနောက်မီးရထားအလုပ်သမားများကချွတ်ယွင်းမူလတန်းအဆုံး Turgut Wolf ကစုံစမ်းစစ်ဆေးအစပျိုးတွေ့ Ozkan က Parker, Jalaluddin အကြောင်းကို Cetin Yildirim လျင်မြန်စွာ '' သေခြင်းနှင့်ဒဏ်ရာစေနွှဲ '' ဖြစ်ပါတယ် ...
ကတ္တရာက Man ကြည်းတပ် 600 ဖို့လှုံ့ဆျော 13 / 11 / 2014 600 က Man ကြည်းတပ်မှကတ္တရာရွေ့လျား: ကြည်းတပ်မြို့တော်ဝန်ဧပြီလလူတိုင်းကတ္တရာစည်းရုံးခြင်းကိုမြင်ရမယ်လို့ကတည်းက 310 သန်းပေါင်ကျေးလက်ဒေသများရှိကတ္တရာရွေ့လျားခြင်းနှင့် 2015 များအတွက်အသင်းများထူထောင်ကြောင်းအောက်တိုဘာလအတွင်းအလုပ်စတင်ခဲ့သူကို Enver Yilmaz ။ ကြည်းတပ်မြို့တော်ဝန် Enver Yilmaz က, AK ပါတီ5။ Camas ကောင်တီဟာသာမန်ကွန်ဂရက်ပါဝင်ခဲ့။ ဤတွင် Yilmaz နိုင်ငံတော်သမ္မတသည်ပါတီကိုင်တွယ်သူတို့နေဆဲအသစ်တစ်ခုမြို့တော်စည်ပင်ကဖြစ်ခြင်းနေသော်လည်းကြီးသောအမှုတို့ကိုအောင်မြင်ရန်ကဆိုသည်။ Yilmaz ကသမ္မတလူငယ်အသက်အရွယ် "တပ်မတော်အဘို့နေ့ညဉ့်မပြတ်အလုပ်လုပ်ခဲ့သောအရာကိုဖျောကျနော်တို့ပထမဦးဆုံးဝန်ဆောင်မှုတွေကိုပြင်ပမှာ 'ဘုရားသခငျကောင်းကြီးပေးတော်မူ' 'အပြီးကျွန်တော်သွားနေတာကဘာလဲ။ task ကိုလူတွေအများကြီးလတ်မည်မဟုတ်ပါစေပြီ ...
Pamukova နှင့် 41 လူဖြစ်ပွားခဲ့သည်သောမတော်တဆထိခိုက်မှုကြောင့်အချိန်ကုန် 7.5 ယခုနှစ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးဖို့သူတို့ရဲ့အသက်ဆုံးရှုံးပြီးနောက်လူထုတရားခွင်ကြားနာအတွက်ကျလိမ့်မည်ဖွင့်လှစ်မနက်ဖြန်ကျင်းပပါလိမ့်မည်။ 06 / 02 / 2012 သာနှစ်ခုယာဉ်မောင်းအသေးအဖှဲပြစ်ဒဏ်များကိုလက်ခံရရှိရှိရာကိစ္စများတွင်သူချွတ်ယွင်းတစ်ဝက်တွေ့ရသောရထားလမ်းနှင့် ပတ်သက်. စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏တာဝန်ခံအတွက်ကျွမ်းကျင်သူခွင့်ပြုမထားပေ။ Öldüğüyleကွယ်လွန်သူအဆိုပါ kata 22 လူတွေ 2004 loosing နီးစပ်သူတစ်ဦးဦး၏အသက်တာ၌ဒဏ်ရာရရှိလေ့ကျင့် "အရှိန်" ကို Pamukova 41 Teammuz xnumx't အတွက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ခဲ့သည်။ အဟောင်းသည်ထင်ရှားမြန်နှုန်းမြင့်မီးရထားရထားလမ်းနှင့်အတူစမ်းသပ်မှုတွေနောက်ကွယ်မှအဖြစ်ဆိုးအပေါ်ကျွမ်းကျင်သူအစီရင်ခံစာ။ မတော်တဆမှု Xnumx'inc Sakarya အဆိုပါ Assize တရားရုံးအတွင်းအများပြည်သူစမ်းသပ်ဖွင့်လှစ်။ အဆိုပါကျွမ်းကျင်သူရဲ့အစီရင်ခံစာ, ပထမဦးဆုံးအင်ဂျင်နီယာ 100 2, 8 ဒုတိယအင်ဂျင်နီယာ38 1 နှင့်ရထားလမ်းများတွင်ချွတ်ယွင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အားလုံးငွေတောင်းခံလွှာ, ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အင်ဂျင်နီယာ Fikret Karabalut 8 လ, ဒုတိယအင်ဂျင်နီယာ engineer မှထုတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ် ...
အဆိုပါ CHP အုပ်စုတစ်စုဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ Corlu ရထားအဖွစျဆိုးများအတွက်အဆိုပြုချက်ကို 20 / 07 / 2018 အခမဲ့ပုဂ္ဂလိက CHP အုပ်စုတစ်စုဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ Engineering Altai နှင့်Özkoçပီတာ, Çorluကျွန်တော်တို့ရဲ့ compatriots အသတ်ခံရသောရထားချုံးချုံးကျသွားတယ်အတွက်ပျက်ကွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်နှင့် 24 ပါလီမန်သမ္မတတစ်ဦးသုတေသနအဆိုပြုချက်ကိုတင်သွင်းတာဝန်ရှိသူတွေကိုခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရန်အတွက်ဖြစ်သည်။ CHP ခေါင်းဆောင် Kemal Kılıçdaroğluအားဖြင့် Corlu မှာဖော်ပြထားတဲ့နှင့်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ Faik ÖZTRAKသမ္မတ၏ CHP ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကပြင်ဆင်အစီရင်ခံစာ, အထူးသဖြင့်အုပ်စုတစ်စုဒုတိယဥက္ကဋ္ဌသည်နှင့်အညီ, ထို Altai အဘိဓါန်များနှင့်Özkoçလက်မှတ်ပေါင်း၏ပါလီမန်သမ္မတတစ်ဦးသုတေသနအဆိုပြုချက်ကိုတင်ပြခဲ့ကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ 8 ၏နိုင်ငံသားများဒဏ်ရာရနေချိန်မှာရွေ့လျားမှုအတွက်သုတေသန "ကျွန်တော်တို့ရဲ့ compatriots ၏ဇူလိုင်လ 2018 24 318 သမိုင်းမတော်တဆမှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်ရထားထဲမှာTekirdağÇorluခရိုင်အတွင်းရှိသူတို့ဘဝဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ Thrace အများအပြားအတွက်အချိန်ကြာမြင့်စွာက ...
ကတ္တရာက Man ကြည်းတပ် 600 ဖို့လှုံ့ဆျော
Pamukova နှင့် 41 လူဖြစ်ပွားခဲ့သည်သောမတော်တဆထိခိုက်မှုကြောင့်အချိန်ကုန် 7.5 ယခုနှစ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးဖို့သူတို့ရဲ့အသက်ဆုံးရှုံးပြီးနောက်လူထုတရားခွင်ကြားနာအတွက်ကျလိမ့်မည်ဖွင့်လှစ်မနက်ဖြန်ကျင်းပပါလိမ့်မည်။
အဖွစျဆိုးပြီးနောက် Corlu ရထားတိတ်ဆိတ်